တရုတ် Richina - စော Blade ကိုနှင့်အတူလူမီနီယမ် Long ကလက်ကိုင်သစ်ပင် Pruner
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: HG1403
ယေဘုယျအား Length: 1340mm
Long ကစော Blade ကိုနှင့်အတူသစ်ပင် Pruner ကိုငျတှယျ
ဝင်ရိုးစွန်းစော သုတ်သင် Tools များ
ယေဘုယျအားအရှည်သစ်ပင် pruner ၏ 1340mm ဖြစ်ပါသည်
ကွေးသို့မဟုတ်ဒူးထောက်သို့မဟုတ်သိပ်သည်းသို့မဟုတ်မိတ်ကိုချုံသို့ရောက်ရှိလာပြီမပါဘဲအနိမ့်ဖြတ်တောက်မှုအောင်, တစ်ဦးလှေကားတက်မပါဘဲမြင့်သောအကိုင်းအခက် pruning အကောင်းဆုံးသစ်ပင် pruner
ကြိုး-အခမဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ Long ကသစ်ပင် pruner သင်နှစ်လက်ကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်နှင့် anags နှင့်ရှုပ်ထွေးဖယ်ရှား
စံပြဝင်ရိုးစွန်းတံစဉ်များကိုရှာဖွေနေထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစော? ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်လူမီနီယမ် Tree Pruner အရည်အသွေးကိုအာမခံဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ Long ကလက်ကိုင် Tree Pruner ၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။